Tanàna mahafinaritra 9 ho fialantsasatra | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Fialan-tsasatra, General, Inona no ho hita
ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro Izy ireo dia toy ny fitsangatsanganana kely izay mety indrindra amintsika hahitantsika ny vazantany misy antsika. Androany dia hahita tanàna mahafinaritra isika amin'ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro. Betsaka ny toerana mety hijerena zava-baovao, ary indrindra raha tanàna kely tsy dia be loatra ny fizahan-tany.
Ireo tanàna mahafinaritra ireo dia miparitaka manerana ny jeografia, saingy azo antoka fa akaikin'ny toerana onenananao dia misy maro toerana kely mbola tsy fantatrao ary mendrika izany izy ireo. Azonao atao ny manao lisitra toy izao hahitana zoro manana zavatra manokana ary mbola tsy tonga ny fizahan-tany marobe.
2 Hondarríbia, Firenena Basque
4 Bocairent, Fiarahamonina Valencien
Tanàna jono kely i Luarca izay miavaka amin'ny fiadanany sy ny hatsarany. Na ny manodidina na ny tanàna mihitsy dia samy manana tolotra betsaka. Tanàna amoron-tsiraka Asturian mahazatra izy io, miaraka amin'ny serananany izay miantsona ny sambo mahafinaritra. Ao amin'ny faritra avaratr'i Luarca Azontsika atao ny mahita ireo trano amin'ny fomba Indiana mahazatra, an'ireo izay niverina avy tany Amerika dia nanapa-kevitra ny hanangana trano vaovao amin'ny taniny. Azontsika atao ny mitsidika an'i Cabo Busto, miaraka amin'ireo vatolampy, na morontsirak'i Portizuelo.
Hondarríbia, Firenena Basque
Voalaza fa ity dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any amin'ny Basque Country, miaraka amin'ny tanàna antitra tsara tarehy izay mendrika ny mandeha an-tongotra hahitana isaky ny zoro kely. Ny Puerta de Santa María no vavahady lehibe hidirana ao an-tanàna, hatramin'ny vanim-potoana fahagola. Amin'ny arabe malalany dia ny Lapan'i Zuloaga tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ao amin'ny foibe manan-tantara ihany koa dia misy tranobe hafa, toa ny Castle of Carlos V. Tsy azontsika atao ny mankafy ireo trano efa antonony sy mahazatra vita amin'ny hazo.
Garachico dia tanàna kelin'i Tenerife, seranan-tsambo taloha ao amin'ny nosy izay miavaka ny Roque de Garachico. Ny Plaza de la Libertad dia toerana afovoany, misy ny sasany amin'ireo trano tranainy sy mahaliana indrindra, toa ny Church of Our Lady of the Angels na ny Museum of Science Natural and History. Ny Puerta de Tierra dia fahatsiarovana ny fidiran'ny entana taloha tao an-tanàna, izay niavaka tamin'ny naha-seranan-tsambon'ny nosy azy taloha. Ao anatin'ity vala ity no ahitantsika zaridaina tsara vangiana. Kely ny Castillo de San Miguel, saingy iray amin'ireo akanjo fiarovan-tena miaro ny nosy.
Bocairent, Fiarahamonina Valencien
Bocairent dia miorina ao amin'ny Valencian Community, izay tanàna fiaviana Silamo. Vohitra iray nosokirina tamin'ny vatolampy arabe ety misy fiakarana sy fidinana izay ahafahantsika mandeha mahita zoro mahaliana kely. Iray amin'ireo firavaka amin'ny fizahan-tany any ambanivohitra ity vondrom-piarahamonina ity, ka io no tanjona lavorary hankafizana tanàna iray izay toa nijanona ny fotoana.
El Lapan'ny mpanjaka Olite, taonjato faha-XNUMX no tena manintona azy. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nitarina ny rindrina ary trano mimanda izy io ahafahanao mitety fitsangatsangana. Azontsika atao ihany koa ny mitsidika ny Medieval Galleries, miaraka amin'ny akanjo sy zavatra taloha tamin'ny fotoana hafa. Tolo-kevitra iray hafa ho an'ity tanàna ity ny fandehanana mamaky ireo arabe antitra efa nitazona tsara.
San Vicente de la Barquera dia iray amin'ireo tanàna fanjonoana izay tsara tarehy tsy ho an'ny arabeny ihany, fa ho an'ny tontolo voajanahary sy ny morontsiraka manodidina. Ny sasany amin'ireo toerana hitsidihana dia ny Castillo de San Vicente ary koa ny fiangonana Santa María de los ángeles tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny Sanctuary of La Barquera dia tempoly naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX misy refy kely misy ny Virgen de la Barquera.
Caravaca de la Cruz dia niaina ny famirapiratany farany tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, niaraka tamin'ny Order of the Temple. Ny tsangambato malaza indrindra dia ny Castle of Caravaca, aiza ny fitoerana masin'i Santísima sy Vera Cruz. Tanàna masina fahadimy manerantany izy io, miaraka amin'i Santiago de Compostela, Jerusalem, Santo Toribio de Líebano ary Roma.
Tena miavaka ity tanàna ity, noho ny fananany trano nipetraka teo ambonin'ny vatolampy tendrombohitra. Ao amin'ny tapany ambony misy ny tranobe Moorish taloha izay manana fomba fijery mahavariana. Ny fiampitana ny tetezana vato na ny mankany amoron'ny renirano Tolosa no sasany amin'ireo zavatra azontsika atao eto amin'ity tanàna mahafinaritra ity.
Ny tanin'i Albariño dia tanàna mahafinaritra ihany koa azo tsidihina. Tsy tokony hahita ny famiazam-boalobony fotsiny isika, izay namoronana an'ity divay malaza eran-tany ity. Ao an-tanàna dia azontsika atao ihany koa ny mitsidika ny sisa tavela amin'i Santa Mariña Dozo ao afovoan'i Cambados, na ny Tilikambon'i San Sadurniño. Villa mangina ao amin'ny faritra Rías Baixas tsara tarehy, akaikin'ny morontsiraka sy Pontevedra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Tanàna mahafinaritra 9 ho fialantsasatra